Uri kukurirwa ne macOS Sierra's otomatiki syncing? | Ndinobva mac
Uri kukurirwa ne macOS Sierra's otomatiki syncing?
Vanoverengeka ndivo vatinoshanda navo vandibvunza zvekuita kuti ndisanyanya kukurirwa neinotomatiki kuwiriranisa macOS Sierra Uye ndezvekuti chero chinhu chaunoisa paDesktop uye mune iyo Zvinyorwa dhata chinotumirwa kuICloud gore, chero bedzi uine nzvimbo, uye upe kukosha kwakanyanya kune iyo EU poindi kana iwe ukabvisa basa racho, mafaera akakunda ndeaya egore kwete aya ekomputa yako.
Chinhu chekutanga chandakaudza vamwe vangu ndechekuti kana vasingade mashandiro aya, vanofanirwa kuimisa uye inoshanda neiyo iCloud Drive nzvimbo mune yepadivi yeiyo Finder hwindo.
Isu takakwanisa kuve nemafaira edu akaponeswa muICloud gore kwemwedzi yakawanda ikozvino, uye patakavhura iyo iCloud Drive sevhisi, icho chikamu uye zvese izvo zvatichawana ipapo zvakangoerekana zvaonekwa mubato reS Finder, yaichengetwa mugore uye taive nayo kubva kune chero chishandiso kana komputa.
Nekudaro, Apple yanga ichida kuti maitiro acho anyanye kuvanzika kubva kumushandisi, ndiko kuti, havazive kuti kuwiriranisa kuri kuitika. Kune izvi, yakafunga kuti mu macOS Sierra mushandisi anogona kusarudza kana nzvimbo dzeDesktop neMagwaro dzakabatana otomatiki uye kumashure neICloud.
Ndatotaura kuti uyu mubvunzo unobvunzwa neiyo macOS Sierra system sezvo iwe ukaivhura kekutanga kana iwe uchiisa uye kana usina kunyatso chengeteka kana kuchengetedzeka usamise sarudzo kusvika iwe waverenga zvishoma nezvekuti inoshanda sei chaizvo.
Huye, ava vatinoshanda navo vatotanga kuwiriranisa patsva paMacs avo uye vanondiudza kuti havadi kurega kuishandisa uye ndezvekuti ivo vanoona zvichikwanisika kuti ndiyo system pachayo inoita basa rakasviba rekutora mafaera ese. uye kuvaponesa mugore. Kunyange zvakadaro, havana kugutsikana zvakanyanya nemafaira ese ari kuisirwa gore uye vakandikumbira rubatsiro kuti ndizive kwekuwana dhairekitori yekuchengetedza munharaunda.
Kune mushandisi wepakati-epamberi harisi dambudziko uye nderekuti isu tinokwanisa kumisikidza mune Tsvaga dzeKutsvaga iyo inotiratidza dhisiki rakaomarara uye mukati medu mushandisi tinogadzira dhairekitori renzvimbo yekuchengetera. Asi sezvo vese vashandisi vasina ruzivo, isu tinokuudza maitirwo azvo:
1º Iwe unofanirwa kuvhura iyo Tsvaga uye mune yepamusoro menyu Finder tinya pa zvaunofarira.
2º Muhwindo rinovhura tinofanirwa kubaya pane iyo tabo Sidebar uye zvinhu zvinoonekwa isu tinoshandisa iyo hard disk uye nenzira iyo hard disk ichaonekwa mune yakataurwa sidebar.
3º Iye zvino tinodzvanya pane hard drive uye hwindo reSe Finder rinovhura matinogona kuwana folda yatichadaidza NZVIMBO YEMAHARA uye iyo yatinozoshandisa kutora mafaera ese atinoda kuve nawo pakombuta asi kwete mugore.
Zviripachena kuti izvi zvatakataurira kwauri i "chigamba" chatisingafanirwe kuita, asi ndiyo nzira yatinobatanidza gore neLOCAL. Kana iwe usingade nenzira iyi, zvakanakisa kudzima iyo Desktop neMagwaro kuenderana uye shanda chete neiyo iCloud Drive nzvimbo mune iyo Tsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Uri kukurirwa ne macOS Sierra's otomatiki syncing?
Uye hazvisi nyore here kuvhura dhairekita iwe raunoda mukati mezita rako rekushandisa? Izvo hazvibvumirane!
Pindura ku stb339
Google inoda asi haigone, aya ndiwo tambo dzeMODE
Apple's Magic Trackpad yepasi chete makumi manomwe emaeuro